Horudhac: Manchester City vs Real Madrid: Shaxda ay ku soo geli karaan, Xaqiiqooyinka & Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka soo laabashada laga sugayo Los Blancos – Gool FM
(Manchester) 07 Agoosto 2020. Kooxda Real Madrid ayaa indhaha ku haysta inay soo laabasho sameyso kaddib markii looga adkaaday 2-1 lugtii hore, marka ay caawa garoonka Etihad kula ciyaareyso Manchester City lugta labaad wareegga 16-ka Champions League.
Man City ayaa duubtay guul cajiib ah markii ay labadaan kooxood ay kuwada kulmeen garoonka Bernabeu bishii Febraayo, taasoo la micno ah inay Real Madrid u baahan tahay inay wax badan qabto haddii ay doonayaan inay markale u gudbaan wareegga siddeed dhammaadka tartankan.
Benjamin Mendy ayaa ka ganaaxan Kooxda Manchester City, waxaana la arkaa in booska garabka bidix ee daafaca uu ku soo bilowdo Oleksandr Zinchenko, inkastoo Joao Cancelo uu yahay dooq kale oo uu haysto tababare Pep Guardiola.
Sergio Aguero ayaa garoomada kaga maqan dhaawac jilibka ah, sidaasi darteed waxaa weerarka Sky Blue hoggaamin doona kulanka caawa Gabriel Jesus, sidoo kale Bernardo Silva ayaa ciyaari kara sagaal beenaad.
Saxiixyada cusub Ferran Torres ee Nathan Ake ayaa u ciyaari doonin kooxda Manchester City kulanka caawa.
Kabtan Sergio Ramos ayaa ganaax ku seegaya kulankan kaddib markii uu kaarka cas qaatay kulankii lugta hore, waana dhibaatada ugu weyn ee caawa haysata Los Blancos, inkastoo uu safarkooda qeyb ka yahay oo uu soo xaadiri doono caawa garoonka Etihad haddana daawade ayuu ka ahaan doonaa kulan.
Eder Militao ayaa buuxin doona booska uu ka maqan yahay kabtan Ramos, waxaana uu daafaca dhexe kala garab ciyaari doonaa Raphael Varane.
Marcelo ayaa la qiimeyn doonaa xaaladdiisa, iyadoo Ferland Mendy uu safan karo kulankan, halka Mariano uusan ciyaari doonin kulankan kaddib markii laga helay faafaha Karoona.
Midkoodna Gareth Bale iyo James Rodriguez lama safrin kooxda Los Blancos inkastoo ay taam yihiin, mana ciyaari doonaan kulanka caawa.
>- Kani waa kulankii saddexaad ee tartanka Champions League ku dhexmara garoonka Etihad Kooxaha Manchester City iyo Real Madrid, labadii kulan ee hore ayaana ku soo dhammaaday barbaro (1-1 heerka guruubyada kal ciyaareedkii 2012-13 iyo 0-0 afar dhammaadkii lugta hore ee fasal ciyaareedkii 2015-16).
>- Real Madrid ayaa guuleysatay shan ka mid ah 11-kii kulan ee Champions League ay ku ciyaareen England, waxaana ay haystaan (5 guul, 3 barbaro iyo 3 guuldarro), iyagoo garaacay afar koox oo kala duwan; (Man Utd, Leeds United, Liverpool iyo Spurs). Labada koox ee kaliya kuwaasoo garaacay ka badiyay shan koox oo Ingariis ah Champions League iyagoo booqday waa Bayern Munich (5) iyo Barcelona (7).
>- Tartanka weyn ee Uefa Champions League, Manchester City ayaa ka gudubtay dhammaan toddobadii kulan ee ugu dambeysay ee bug-baxa oo ay soo adkaadeen lugta hore iyagoo marti ah, isla markaana ay lugta labaad ku dheeleen garoonkooda.
>- Real Madrid ayaa raadineysa inay soo laabasho sameyso kulankan kaddib markii soo laabasho ka sameysay guuldarradii lugta hore ee wareegga group-yada Champions League soo gaaray markii ugu horreysay tan iyo 2015-16 wareegga siddeed ee ay la ciyaareen Wolfsburg, iyagoo ka soo baxay wareegaas (0-2 lugtii hore looga adkaadayna, lugtii labaad ku badiyey 3-0).
>- Tababaraha Man City ee Pep Guardiola ayaa guuleystay 28 kulan oo heerka bug-baxa Champions League inka badan tababareyaasha kale ee tartanka taariikhda, Pep ayaana eegaya inuu noqdo macallinkii saddexaad ee Real Madrid heerkaan bugbaxa ku reeba wax ka badan haljeer kaddib Marcello Lippi (1995-96, 2002-03) iyo Ottmar Hitzfeld (2000-01, 2006-07).
>- Zinedine Zidane ayaa laga cirib-tiri karaa heerka bugbaxa Champions League markii ugu horreysay, isagoo horey u guuleystay 12-kii kulan oo uu hoggaamiyey kooxda Los Blancos.
>- Zidane ayaa guuleystay labo ka mid ah lixdii kulan ee ugu dambeeyey oo uu wajahay kooxda ka dhisan England waana rikoor ah (33%).
>- Shantii kulan ee uu Pep Guardiola garoonka kooxdiisa lagu ciyaaray heerka bugbaxa Champions League intii uu macalin u ahaa Man City, waxa uu haystaa (3 guul iyo 2 barbaro) waxaana shantaas kulan laga iska dhaliyey 28 gool (18 gool ayay dhalisay, halka 10 gool laga dhaliyay), iyadoo saddexda guul ee isku xigta ay soo marayaan 5-3 vs Monaco, 7-0 vs FC Schalke 04 iyo 4-3 vs Spurs, iyagoo guud ahaan dhaliyay kulammadaas 22 gool.
>- Real Madrid ayaa guuleystay afarteedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay heerka bugbaxa Champions League ku ciyaartay meel ka baxsan garoonkeeda, tan iyo markii ay guuldarro 2-1 kala soo kulantay Atlético Madrid lugtii labaad ee semi-finalka fasal ciyaareedkii 2016-17.
>- Weeraryahanka Man City ee Gabriel Jesus ayaa si toos ah ugu lug leh 14 gool 16 kulan oo Champions League ah (12 gool waa uu dhaliyey, halka 2 kale uu caawiyey), isagoo shabaqa soo taabtay saddex ka mid ah afartiisii kulan uu ku soo bilowday safka hore kulammada knockout-ka.
>- Haddii la reebo caawa, waxay noqonaysaa markii ugu horreysay oo muddo lix xilli ciyaareed ah ee intii u dhaxeysay 2004-05 iyo 2009-10 oo Real Madrid aysan gaarin ugu yaraan wareegga siddeed dhammaadka tartanka Champions League xilli ciyaareedyo isku xigta, iyagoo Ajax ay ku reebtay wareegga 16-ka Champions League xilli ciyaareedkii hore ee 2018-19.
>- Lugtii hore kooxda Real Madrid kaliya sagaal shuut ayey ku tuurtay Manchester City, kaliya waa isku daygii ugu yaraa ee Champions League ay sameyso inta uu hoggaaminayo macallin Zinedine Zidane tan iyo markii 7 shuut tuurtay kulan ay ka horjeedeen Kooxda Bayern Munich bishii April sanadkii 2018.